အတ္တရောင်ပြန် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
June 7, 2008, 4:10 am Filed under: E-Books လတိုင်းရဲ့ ၇ ရက်နေ့တိုင်း တစ်ခုခုမှတ်သားစရာ စွဲကျန်ရစ်တတ်တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေကို ကျွန်မ စာဖတ်သူတွေအတွက် ကြိုးစားဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ရသ၀တ္ထုတိုလေးတွေကတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ရေးဖြစ်သလို အချို့ဝတ္ထုတိုတွေကိုတော့ ကျွန်မနှစ်သက်ဖတ်ရှုမိတာတွေထဲကနေ ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တရဆိုတာလူတိုင်းမှာ ရှိစမြဲပါပဲ .. ။ (၇)ရက်နေ့တစ်ရက်ဟာ ကျွန်မအတွက် မေတ္တာရေးနှင့်ပတ်သတ် အမှတ်တရနေ့တစ်ခုဖြစ်တာမို့ ထိုနေ့တွေတိုင်းမှာ မေတ္တာရေးနှင့်ပတ်သတ် မှတ်သားဖွယ်အကြောင်းအရာကိုပဲ ကျွန်မရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ် ။
“သူ့လောကလေးထဲမှာ .. သူ့စာအုပ်တွေသာ ပထမ ၊ သူ့စာအုပ်တွေသာ ဒုတိယ ၊ သူ့စာအုပ်တွေသာ တတိယ ၊ အဲဒီလောက် သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်တာလေ .. ။ အဲ .. သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရမယ့် အရာတစ်ခု ရှိရဦးမှာပေါ့ .. ။ ဟုတ်သားပဲ .. သိပ်မြတ်နိုးစရာကောင်းလှတဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည် ခန္ဓာပါးလျလျနဲ့ မာနကြီးပုံရတဲ့ မျက်နှာလှလှကလေးနဲ့ ကောင်မလေးပေါ့ .. ။ သူမကလည်း သူ့ရဲ့ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ ကမ္ဘာလေးထဲမှာ အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကလေးတစ်ခုပေါ့ .. ။
သူ တက်တက်ကြွကြွ ဖြေလိုက်တယ်။ သူ ဖြေချင်တာက အမှန်တော့ အဲဒီစကားမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းကျော်ဝတ္ထုတွေ အိမ်မှာ စီးရီးအစအဆုံး ရှိတဲ့အကြောင်း ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားချင်တဲ့စကားပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမျိုသိပ်ထားလိုက်ရတယ်။ သူမ ကြည့်ရတာ သူ့စာအုပ်တွေကို သဲသဲလှုပ် စွဲလမ်းမက်မောတာကို သိပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ ပုံစံမပေါ်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေဟာ သ၀န်တိုတတ်တယ်လို့တော့ ကြားဖူးသား။ ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ သူမဟာ စာအုပ်တွေကိုတောင် ဖက်ပြိုင်သ၀န်တိုနေပုံပဲ။ ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ မိန်းမတွေဟာ အတော်ရယ်စရာ ကောင်းတာပဲနော် ။ ဒါပေမဲ့ သူ မဝေဖန်ရဲဘူး …. “
ြီ ညီမကြောင့် လွန်းထားထား စာကို ပထမဆုံးဖတ်ဘူး သွားပါပြီ။ ညီမပြောသလိုပါပဲ သူ့ဟာနဲ့သူ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ယူစရာတွေမကုန်ပါဘူး……..
June 7, 2008 @ 12:04 pm Reply	၇ ရက်နေ့ တိုင်းမှာညီမလေးလင်းလက်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
Comment by myanmarpyi
June 9, 2008 @ 2:10 pm Reply	အမရေ ညီမလာဖတ်သွားပါတယ်နော် စာရေးဆရာမလွန် ထားထားကို ညီမလည်းကြိုက်တယ် သူစာတွေကို ဖတ်လိုလည်းမ၀ပါဘူး အခုအမတင်ပေးတဲ့ စာကို လာဖတ်သွားပါတယ် အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်
Comment by ယုန်ကလေး
June 10, 2008 @ 6:16 am Reply	ညီမ ရေ.. ကျွန်တော် ဒေါ်စုအတွက် ဗီဒီယိုကန်ပိန်းလေးလုပ်နေပါတယ်။ အားလုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ http://hteinkmin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=9
ကျွန်တော့လင့်ကိုပေးထားပါတယ်။ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးနိုင်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ လုပ်ရင် ဒီကောင်တွေကြာကြာမခံဘူးလို့ ယုံပါတယ်။ နိုင်သည်ဖြစ်စေ မနိုင်သည်ဖြစ်စေ မလျှော့်တမ်းဇွဲနဲ့ လုပ်သွားကြပါစို့ဗျာ..
June 10, 2008 @ 6:33 pm Reply	လွန်းထားထား ၀တ္ထုလဲ ဖတ်သွားသလို စီဘောက်စ်မှာလဲ နှုတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အဆင်မပြေဘူးကွာ။ ညီမပဲ အကို့နာမည်နဲ့ အကောင့်လုပ်ပြီးတော့ ဂျီတော့မှာ အော့ဖ်မက်ဆေ့နဲ့ ပေးထားပါဦး။ အချိန်အားရင်ပေါ့။
June 10, 2008 @ 10:08 pm Reply	နအဖသားသမီး၊သမက် စစ်ခွေးတွေနဲ့ စစ်ခွေးအောက်ဆွဲ အလိုမရှိဗျို့..
စိုးထက်က ဗိုလ်ချုပ်သမက် စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်က ထောက်လှမ်းရေးက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးဦးလေးအဒေါ်က သူမငယ်ငယ်ထဲက USA ကိုခေါ်ယူမွေးစား၊ အဖေရင်းအမေရင်းက မြန်မာပြည်မှာရှိ အဖေကထောက်လှမ်းရေးက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်၊ ခိုင်မာသောသက်သေများပြနိုင်.. စိတ်ဝင်စားလျှင်ဆက် ကွန်မန့်ပွတ်၊ အချိန်ကုန်ခံလာအော်ပေးမည်ဖြစ်၊
June 13, 2008 @ 2:27 pm Reply	နအဖသားသမီး သမက် စစ်ခွေးတွေနဲ့ စစ်ခွေးအောက်ဆွဲ အလိုမရှိဗျို့
မြန်မာပြည်က နအဖ ကြီးကြီး MASTER သားသမီးသမက်တချို့ဒီလိုပဲ အနောက်နိုင်ငံကြီးတချို့မှာ (သတင်းစာတွေမှာတော့ မွှန်နေအောင် ဝေဖန်ပြီး) ရောက်နေကြတာ မသိတဲ့ပြည်သူတွေကို ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထား၊ ခိုင်မာသော သက်သေများပြ၍ဖော်ထုတ်ပေးရမယ်
မကြာသေးခင်ကမှ အင်္ဂလန်သံရုံးကနေ နှစ်ပြည့််သွားလို့ ပြည်တော်ပြန်ရမှာ မပြန်ပဲ အင်္ဂလန်မှာ လုပ်သွားတဲ့ ရုံးအုပ်ရာထူးအဆင့်ရှိတဲ့ ဒေါ်နွယ်နီမိသားစုရဲ့ထွက်ဆိုချက် နဲ့တကွ (မင်းတို့ Brother အောင်လင်းထွဋ် လိုပေါ့ကွာ) မြန်မာပြည်မှရရှိထားတဲ့ မြင့်ဆွေမိသားစု (စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ပုံအပါအဝင်) အင်္ဂလန်သံအမတ် ဗိုလ်မှုးချုပ်နေဝင်းနဲ့သူ့မိန်းမ ဆို စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ကို ဖင်မနေရတဲ့ ဓါတ်ပုံများရော၊ မြန်မာသံရုံးကဟာတွေ သူဆီမှာ ထမင်းချက် ကျွန်ခံပေးရတဲ့ ဓါတ်ပုံများရော မကြာခင်သံရုံးမှ လုပ်မည့်ပွဲများတွင် သူတို့တွေ့ဆုံကြပြီး စီးဇိမ်ရစ်မူးပျော်ပါးကြမည့် အခါရိုက်မယ့် ဓါတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရော မင်းတို့လိုလူတွေထဲက အသားထဲကလောက်ထွက်ပြီးပေးထားတာ၊ ထပ်ပေးအုးံမှာ၊ ပေးတော့ဖော်တော့လဲယူရတာပေါ့ကွ..
မကြာခင် ဘလော့တခု တည်ဆောက်၍ စိတ်ဝင်စားသည့် ပြည်သူများအား ပြသမည်ဖြစ်ပါကုန်.. မျှော် ဒူဝေဝေဝေ
June 14, 2008 @ 6:04 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI